Online MMO မှာ lag မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? – REDPlayer
lag ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းကြုံဖူးပါတယ်။ lag ဖြစ်ရင် ဘယ်လောက်ပဲ item တွေဆက်ထားထား team ကဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေကောင်းနေ ဆော့ရတာအဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ကဘေး ထွက်ထိုင်နေရသလိုဖြစ်လာပါ လိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ဒီကိစ္စရှင်းဖို့ သိပ်လွယ်လှတယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ player တစ်ယောက်ချင်း ရဲ့ အလေ့အထ၊ သူ့ရဲ့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ device၊ နေရာ နဲ့ game server ပေါ်လည်းမူတည်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် lag ဖြစ်တာက ကိုယ့်ကြောင့် တော့ မဖြစ်စေချင်ကြဘူးမလား။ လုံးဝ lag မဖြစ်အောင်တော့ လုပ်လို့မရပါဘူး၊ တတ်နိုင်သမျှ ပြင်ဆင်ထားလို့ရအောင်ရေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ connection ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ device ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ FPS လို့ခေါ်တဲ့ frame rate ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ MOBA game တွေက ဖုန်းရဲ့ CPU/GPU ကိုအလုပ်များများလုပ်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါက FPS ကိုသွားပြီးထိခိုက်တာပါပဲ။ ဒီမှာတင် screen ရပ်နေတတ်တဲ့ screen freeze လို့ခေါ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်လာတာပါ။ lag ဖြစ်တယ်လဲပြောလို့ရပြီပေါ့။
ဖြစ်တတ်တာက team fight တွေလုပ်တဲ့ အခါမှ ကိုယ်က lag ဖြစ်ဖြစ်နေတာမျိုး ကြုံဖူးကြလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် FPS ကြောင့်ဖြစ်တတ်တာများပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ CPU အလုပ်လုပ်ရဆုံးအချိန်ပဲလေ။ အဓိကကတော့ ကိုင်တဲ့ hand-set က low-end model ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သတိထားရပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ lagဖြစ်တာက များသောအားဖြင့် သုံးနေတဲ့ device ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
low-end device ဖြစ်နေလို့လဲ ပြသနာတော့သိပ်မကြီးပါဘူး။ game setting မှာ graphic ကိုချပြီးဆော့လို့ရပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ထွက်တော့ နည်းနည်းကျသွားမှာပေါ့။ ပြီးတော့ တစ်ခြားသုံးနေတဲ့ app တွေရှိရင်ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။
ပြီးတော့ တစ်ချို့က PC မှာ emulator သုံးပြီးဆော့ကြပါတယ်။ PC ကမြင့်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ မဟုတ်ရင်တော့ သူ့မှာလည်း lag ဖြစ်တာကြုံရတတ်ပါတယ်။
ဆော့နေတဲ့ device ကောင်းရဲ့သားနဲ့ထစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ connection ကြောင့်ဖြစ်တာ ရှင်းပါတယ်။ Connection မှာ2ပိုင်းရှိပါတယ်။ တစ်ပိုင်းက ဖုန်းထဲကအပိုင်းပါ။ နောက်တစ်ပိုင်းက တော့ server ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ဒီမှာတော့ရှိတယ် connectin က 10Mbps, 100Mbps, 300လောက်ရှိလည်း lag ကဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဒီ bandwidth တွေက game အတွက် latency နဲ့သိပ်တော့ မဆိုင်ဘူးထင်တာပဲ။ အဓိကက ကိုယ်ဆော့နေတဲ့ device နဲ့ server ဘယ်လောက်အပေးအယူမျှလည်း က ပိုပြီးစကားပြောမယ်ထင်တယ်။ အချက်တွေကတော့များတယ် server ရဲ့ နေရာ loading တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။
ဥပမာ…MLBB ကတစ်ကမ္ဘာလုံးကဆော့ကြတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ဒီတော့ server တွေရဲ့နေရာတွေက ပြန့်ကြဲနေပြီးတော့ ဆော့နေတဲ့သူ တွေနဲ့လည်းနေရာမတူနိုင်ပါဘူး။ တစ်ပွဲအတွက် နေရာမတူတဲ့ လူ၁၀ယောက်ကို တစ်ခြားတစ်နေရာမှာရှိတဲ့ server ဒီပွဲအတွက်တာဝန်ယူပေးလိုက်တာပါ။ ဒါမျိုးပွဲတွေက တစ်ချိန်တည်းမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပွဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတာပါ။ ဒီတော့ server တွေမှာလည်း limit တွေရှိပါတယ်။ သတိထားမိမလားတော့ မသိဘူး တစ်ချို့ လူအများစုဆော့တဲ့အချိန်တွေဆိုရင် lag ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကိစ္စ။ ပွဲတွေအများကြီးကို တစ်ပြိုင်တည်းကိုင်ရတဲ့ အခါ lag ဖြစ်တာ ကတော့ဖြစ်နေကြတွေပါ။
လုပ်နိုင်တာတွေကတော့… အာရှမှာနေမယ် GMT+8 အောက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ 19:00 လောက်ကနေ 22:00 နာရီအတွင်းကတော့ lag ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပဲ၊ လူအများစုရှိနေတဲ့အချိန်လေ။ နောက်တစ်ခုက တစ်မြို့ထဲ မှာ ဒါမှမဟုတ် နီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားနိုင်ပါတယ်။ local player တွေပေါ့ဗျာ။
Connection ကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းနေဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကတော့ ကိုယ်ဘာသုံးလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ကောင်းတာကတော့ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်က အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဖို့ပဲ။ wifi ပဲယူသုံးသုံး၊ data ပဲဖွင့်ဖွင့်ပေါ့လေ။
နောက်တစ်ခုတော့ auto-update တွေဖွင့်ထားရင် ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ connection ကိုဆွဲပြီးသုံးနေမယ့် ကိစ္စမှန်သမျှ ပိတ်ထားလိုက်တာကောင်းပါတယ်။ Cache တွေရှိနေရင်လဲရှင်းသင့်တာပေါ့ဗျာ။
ဒါကတော့ လုပ်လို့ရနိုင်မယ့် ကိစ္စလေးတွေရေးထားတာပါ။ အတွေ့ အကြုံတွေရှိရင်လည်း ပြောသွားကြပါဦး။ အချင်းချင်း sharing လုပ်လို့ရတာပေါ့။
Picture source : Order & Chaos2player.
Samsung ရဲ့ Note 8 အတွက် Gear VR အသစ်